UMbusi Akihito - eziyikhulu namashumi amabili nanhlanu lwamakhosi ummeleli. Ngo-2016, asebukhosini uyomgubhela iminyaka 2776.
Tsigunomiya Prince wazalwa ngo-December 23, 1933. Amasiko yezwe yokuthi uma ingane sasuswa abazali babo, futhi lafunda abafundisi. izikhathi ezimbalwa kuphela ngenyanga, wahlangana nabazali. Talking akuvunyelwe. Bona sabukana, bese umfana uyasuswa. esiqinile Japanese ukusungulwa okunjalo.
Lapho ingane eneminyaka eyisikhombisa ubudala, wabe esethunyelwa esikoleni avaliwe elite e-University of Gakusiyun. IsiNgisi, amasiko Western namasiko kwesikhulu abasha wafunda ngosizo i uthisha waseMelika. Lokuzijabulisa zezingane kuphela wayevunyelwa ukuba ukuxhumana izinhlanzi, futhi imidlalo zezingane - akusiwona ngaye, ongowozalo luka-onkulunkulu. Okujabulisayo izinhlanzi wathi kamuva e enolwazi olujulile ichthyology lapho indoda ekhule wabhala imisebenzi ezibalulekile eziningana.
ababusi Japanese ezibhekwa inzalo unkulunkulu omkhulu, okuyinto likhanyisa esibhakabhakeni - Amaterasu. Isimo abakuso sobukhosi sinamandla kangangokuthi akudingeki amagama. asungula kuye kwasho ukuthi izimbangi esihlalweni sobukhosi abamele lwamakhosi yasebukhosini, asikaze. Ngalolusuku ababusi ngaphandle Japan, ayisekho kunoma yiliphi izwe. Izihloko agcinwayo kuphela Zhaponiya. UMbusi Akihito futhi Hirohito - abameleli lwamakhosi, okuyinto awuzange uphazanyiswe kusuka 660 BC. Nokho, nokubusa eyishumi nesithupha ababusi bokuqala isekelwe kuphela-legends. UMbusi Akihito sinezici ezintathu amandla - esibukweni, inkemba nejaspi isitembu. Uyise uthumela indodana yakhe, lapho isikhulu ithatha ehhovisi. UMbusi Akihito bawamukela ngo-1989.
Kusukela ngekhulu XII, amandla kombusi isuke ingakhululekile kuphela. Manje Japan - amakhosi ohlanga sisekelo, Akihito, Emperor of Japan, ayinakho angempela. Yena, ngokuvumelana nomthetho-sisekelo, kuphela uphawu yezwe, njengoba elingenamikhono izingalo, ifulege nokucula iculo lesizwe. UMbusi Japanese Akihito ikhonza njengombonisi uphawu yokuhlanganisa isizwe. "Ukuthula noxolo okuyobe kusezweni" - yisiqubulo wokubusa kwakhe. Ngakho igama lakhe elihunyushwa ngayo, Heisei okuzokwenziwa ngokuthi ngemva kokufa kwakhe.
Prince Tsigunomiya washada ngo-1959, breaking isiko eyinkulungwane, intombazane noMichiko Okwamafoi okuhanjwa nawo, ababengakholelwa basonta umphakathi ahlukile. Yayiyindodakazi ka engusomabhizinisi ocebile kakhulu futhi enethonya, umuntu ohlakaniphile, ogama umndeni amalungu baklonyeliswa Order "Ukuze kokufaneleka emkhakheni isiko." Yena wathola imfundo yekhethelo isiJapane naseNtshonalanga. Waba Bachelor of Arts ngezinga e "IsiZulu nezincwadi zokufunda." English wakhe free, yena udlala ipiyano ebusheni bakhe yena ubekhona kwezemidlalo futhi uhlangane Prince on inkantolo. Amalungu asebukhosini akayithandanga umshado ezihlongozwayo, kodwa intsha osekelwa umphakathi. Umshado kwakuyisiko futhi kwasakazwa kuyithelevishini.
Ikusasa uMbusi Akihito futhi Empress noMichiko futhi waphula amasiko osungulwe futhi baphakamisa izingane zabo, futhi ezintathu kuzo (nezikhulu ezimbili futhi inkosazana) ngokuzimela. Kwathi yokuthi Crown Princess wathatha ibele yabo ngaphandle kokunikeza abahlengikazi ezimanzi. Banakekela konke futhi unakekele izingane, futhi ukuba bafeze imisebenzi esemthethweni. Engingakusho nje ukuthi kusukela ngo-1959 kuya ku-1989, babevakashela emazweni angu-37 angaphandle. Kuze kube manje, banayo emndenini omkhulu ujabule, okumelelwe esithombeni ngenhla.
UMbusi Akihito sangaphakathi ukuze ngibe seduze kakhudlwana kubantu bakhe. Ngemva 1989, yena nomkakhe bavakashela bonke amane nesikhombisa izizinda of Japan, kanye angu-18 angaphandle. Yena bukhicite izicelo eziningana ezinkulu wokuphenduka phambi amazwe ase-Asia ukuhlupheka kwabo kube ngaphansi umsebenzi Japanese. E-US, asebukhosini wavakashela insimu ka Unai, lapho kwakukhona khona impi phakathi Second neMpi Yezwe nezimbali wabeka ngesikhathi yesikhumbuzo Japanese hhayi kuphela, kodwa futhi amasosha aseMelika. Lokhu kwaba ukwesekwa bukhoma kubantu Japanese, kanye nokuvakasha nezikhumbuzo impi e Tokyo, Hiroshima, Nagasaki futhi Okinawa. Kubaluleke kakhulu e izimpilo zabantu kuleli zwe sase ukufinyelela kuwo ngo-2011 uMbusi ngokuqondene le nhlekelele yaseFukushima. Lokhu akamanga lapho. Esikhathini esingangenyanga ngemva kokuhlinzwa inhliziyo ubehambele khona umcimbi, aphethwe kukhunjulwa izisulu zokuzamazama komhlaba. Abahlali baziswa ke njengoba feat kungxenye yakhe.
Lena iholidi kazwelonke, lapho loMhlabathi, kanye nonkosikazi wakhe nezingane efanelekayo amafasitela ezenziwe ngengilazi inhlamvu, ngambonga abantu bakhe, abafisa kuye inhlalakahle nokuchuma. Ngalolu suku, zonke imigwaqo eminingi ehlotshiswe amafulege esizwe, futhi mayelana amatafula esigodlweni asethwe nge izesekeli ngokubhala, lapho umuntu angashiya siyakuhalalisela yabo.
EJapane, i-emperor akukhulunywa ngegama, kodwa ngokuthi "UHlanga loMhlabathi kuKesari." Ngemva kokufa kwakhe, uzobe okuthiwa uMbusi Heisei, njengoba uzobe ukubizwa ngokuthi inkathi wokubusa kwakhe.
Gleb Gari: Biography nesithombe
Hero Russia Akimova Aleksandra Fedorovna: Biography, imiklomelo, izithombe
YamaGreki Persian Izimpi
Periodization - Iyini? Umhlaba periodization
Onkulunkulu uthande amaGreki, amaRoma futhi lwamaSlav